အကောင်းဆုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်နယ်စပ်ရေးရာဥရောပခုနှစ်တွင်ယူပါရန်လေ့ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်နယ်စပ်ရေးရာဥရောပခုနှစ်တွင်ယူပါရန်လေ့
နယူးမြန်နှုန်းမြင့်, နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားကမ္ဘာတစ်လွှားလိုင်းများဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဆက်လက်. ထို့အပွငျ, သူတို့နီးပါးအမြဲရိုက်နှက် လေကြောင်းခရီးသွား ရည်နှစ်သိမ့်, အမြတ်အစွန်း, နှင့်ခရီးသွားများ၏မြန်နှုန်း. ဤအချက်မှာ, ကမ္ဘာတဝှမ်းပိုပိုပြီးရထားကွန်ရက်များရှိပါတယ်! နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားသို့သူလူတိုင်းကချစ်သောသူ!
ရထားပေါ်တွင်ဥရောပမှတဆင့်ခရီးသွားလာမြန်နှုန်းထက် deceleration အကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျရှောက်သွားသကဲ့သို့ပင် သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်လှပသောရှုခင်း နောက်ဆုံးဦးတည်ရာမှ, သငျသညျဣနြေ္ဒနှင့်အံ့သြဖွယ်ခံစားမိ. ရလဒ်အနေဖြင့်, နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားသွားအပန်းဖြေဖို့အချိန်ဖြစ်လာ, သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အချို့သောအချိန်ရှိသည်နှင့်ပင်တွေးတောဆင်ခြင်.
အမ်စတာဒမ်နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ချိတ်ဆက်ခြင်း, Avignon, ဘရပ်ဆဲလ်, သေးငယ်သော, လိုင်ယွန်, Marseille, ပဲရစ်စ်နှင့်ရိုတာဒမ်, Eurostar ဖြစ်ကောင်းလူကြိုက်အများဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ဖြစ်ပါသည် ဥရောပ၌မီးရထားဝန်ဆောင်မှု. လည်း, Getlink သီးခြားစီရထားလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်. သူတို့ဖြတ်သန်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့အကြား Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း. တစ် network ပေါ်မှာ run နေ အရှိန်အလွန်မြန်သော လိုင်းများ, Eurostar ရထားတဆယ်ရှစ်ကား Class ကိုရေတွက် 373/1 ရထားနှင့်တဆယ်ခြောက်ကားအတန်းအစား 374 ရထား. သူတို့ကမှတက်မှာ run 186 တစ်နာရီမိုင် (300 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ). ထို့အပွငျ, Eurostar အားလုံးလေကြောင်းလိုင်းများပေါင်းစပ်ထက်ပိုခရီးသည်သယ်ဆောင်. ဤသည် Eurostar ကလည်ပတ်သောလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးရထားလမ်းအော်ပရေတာအောင်နေသည်.
Eurostar နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်, ပြင်သစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, နှင့် နယ်သာလန်. Plus အား, ဒါကြောင့်သင်ကလမ်းတစ်လျှောက်ကဤလမ်းကြောင်း၏ကြက်သရေရှုခင်းကိုခံစားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.
Thalys လက်ဝါးကပ်တိုင်နယ်စပ်ရေးရာရထား (ပြင်သစ်: [ကဲ့သို့])
အစပိုင်းမှာပဲရစ်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်အကြား LGV Nord မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းပတ်ပတ်လည် built, Thalys ပြင်သစ်-ဘယ်လ်ဂျီယံမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ်. Eurostar ရထားလမ်း ကားများဒီလမ်းကြောင်းကိုဝေမျှ, သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားများထဲမှအောင်. Thalys ပဲရစ်ကနေဝင်, ဘရပ်ဆဲလ်သို့မဟုတ်အမ်စတာဒမ်မှ လန်ဒန် လိုင်လီနှင့် Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကနေတဆင့်နှင့်ပြင်သစ်ပြည်တွင်း TGV ရထားနှင့်အတူ. Plus အား, Thalys အမ်စတာဒမ်နှင့်တာဝန်ထမ်းဆောင် Cologne, လွန်း! ဒါကသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိသည်ဖို့ likes သူကိုလူတိုငျးအတှကျစိတ်ကူးသတင်းဖြစ်ပါသည်. Thalys အင်တာနေရှင်နယ်, NMBS / SNCB, နှင့် ဂျာမန်ရထားလမ်း Thi စက်ရုံနှင့် NMBS / SNCB ကလည်ပတ်နေချိန်တွင်၎င်း၏စနစ်ကစီမံခန့်ခွဲ. ရလဒ်အနေဖြင့် – Thalys နှင့်အတူ – ဥရောပမှာခရီးသွားရထား ဆက်ဆက်စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်!
အမ်စတာဒမ်, Cologne မှရထား
Cologne Antwerp မှရထား
ယခင်က NS Hispeed အဖြစ်လူသိများ, NS အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မျက်စိနှင့်အတူလူတိုင်းအတွက်နယ်သာလန်အတွက်ရထားလမ်းအော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ် တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကို. NS အင်တာနေရှင်နယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအချင်းချင်းမြို့လည်ပတ်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်နယ်စပ်ရေးရာမှဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူလေ့:
– ဘယ်လ်ဂျီယံ (အချင်းချင်းတိုက်ရိုက်)
– ဂျာမနီနှင့်ဆွစ်ဇာလန် (အချင်းချင်း-Express ကို)
– ပြင်သစ် (Thalys)
အားလုံးအထက်, NS နိုင်ငံတကာလက်ရှိ High-speed နဲ့ Non-မြန်နှုန်းမြင့်န်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုလည်ပတ်နှင့် Nederlandse Spoorwegen ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အလားတူပင်, NS အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်ချိန်ချိန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ Semi-high-speed နဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးစေခြင်းငှါ.
Leiden ရထားမှ Antwerp
ဘာလင် Haarlem မှရထား
ပဲရစ် Haarlem ရထားမှ
လက်ဝါးကပ်တိုင်နယ်စပ်ရေးရာရထား – အဆိုပါ TGV (ပြင်သစ်: တစ်ဦးကအမြင့်မြန်နှုန်းရထား)
SNCF ပြင်သစ်ရဲ့အချင်းချင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးအစိုးရပိုင်အမျိုးသားရေးရထားလမ်းအော်ပရေတာဖြစ်သော TGV လည်ပတ်. အစပိုင်းတွင်ပဲရစ်အပေါ်ဗဟိုပြုပေမယ့်, ကွန်ယက်ရှိပါတယ်, နှစ်ပေါင်းများစွာ, တိုးချဲ့. ဒါဟာယခုပြင်သစ်အနှံ့အဓိကမြို့ကြီးတွေမှာချိတ်ဆက် (Marseille, သေးငယ်သော, ဘော်ဒိုး, Strasbourg, Rennes) ပတျဝနျးကငျြနိုငျငံမြားနှငျ့အတူ. အကြောင်းကိုရှိပါတယ် 110 TGV နှင့်အတူစီးနင်းပြင်သစ်တွင်သန်းခရီးသည်တစ်နှစ်. ကနေဒေတာတွေကိုအလိုအရ ဧပြီလ 2007, TGV အပေါ်အမြန်ဆုံးဘီးတပ်ရထားဖြစ်ပါသည်, ရောက်ရှိ 574.8 km / h (357.2 တစ်နာရီမိုင်). သင်ကအကောင်းဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် ဘရပ်ဆဲလ်မှဆက်သွယ်မှုများကို ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် လူဇင်ဘတ် TGV ရထားနှင့်အတူမြောက်ဘက်တွင်, သေချာသည်.
အရှေ့ဘက်တွင်နိုင်ငံတကာ TGV Frankfurt ရန်သင့်အားယူမည် မြူးနစ်. အလားတူပင်, သင့်ရဲ့ တောင်ဘက်ခရီးသွားမှတ်တမ်း စပိန်အီတလီသို့မဟုတ်ဘာစီလိုနာအတွက်မီလန်သို့တိုက်ရိုက်သငျသညျယူပါလိမ့်မယ်. ခရီးသွားအမှားမလုပ်ပါနဲ့, TGV အရှိဆုံးအဆင်ပြေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားတစျဦးဖွစျသညျ! ထို့အပွငျ, ကနေအများဆုံးအံ့သြဖွယ်ရင်ခုန်စရာခရီးစဉ်မှသငျသညျယူပါလိမ့်မယ် ပဲရစ်မြေထဲပင်လယ်၏ကမ်းခြေရန်. သို့မဟုတ်, အဆိုပါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘော်ဒိုးမှ, လိုင်ယွန်နှင့် Marseille နှင့်ကမ္ဘာကျော်ကိန်း. ထိုကွောငျ့, သငျသညျပြင်သစ်ရောက်ရှိရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ရထားဆွစ်ဇာလန်, သငျသညျ TGV Lyria အားဖြင့် operated နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားစီးကလုပျနိုငျ.
ပဲရစ် Frankfurt ရထားမှ
ပဲရစ်, Cologne ရထားမှ
အကောင်းဆုံးကိုရဖို့ ရထားအတွေ့အကြုံကို မင်းဘဝမှာ, စိတ်ကူးစျေးနှုန်းများနှင့် obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစိတ်သက်သာရာမှာ, အသုံး တစ်ဦးကရထား Save
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cross-border-trains-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml သင် / က / က de သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#renfe #traveleurope အလို့ငှာ ဂျာမန်ရထားလမ်း Eurostar tgv ရထား